By Anu Rana on Apr 22,2018 - 09:29
सप्ताहिक राशी तपाईको यो हप्ता कसरी वित्ने छ, जान्नुहोस (वि.सं. २०७५ वैशाख ९, गतेदेखि वि.सं २०७५ वैशाख १५ गतेसम्म,)
कुल–कुटुम्बको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । वैदेशिक व्यवसायमा कानुनी अड्चनको सामना गर्नुपर्ला । सामाजिक काममा सहभागी भइएला । टाढिएका मित्रसँग भेट हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिएला । स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ । पठन–पाठन सामान्य रहनेछ । मंगलबारदेखि विहीबारसम्म खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ । सप्ताहान्तमा भने केही वादविवादमा परिने सम्भावना देखिन्छ।
वैदेशिक व्यापार–व्यवसायमा अल्झन देखापर्लान् । समाजमा मान–सम्मान पाइनेछ । नयाँ कामको योजना बन्नेछ । वैदेशिक यात्रामा सफलता पाइनेछ । व्यावसायिक कृषि उब्जनीको बिक्रीबाट पैसा हात पर्नेछ । साहित्यिक कार्यक्रम प्रभावकारी रहनेछ । राज्यबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त होला । साथीसँग वैचारिक मतभेद हुन सक्छ । प्रेममा रमाइनेछ । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।बुधवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। आफन्तको साथ जुट्नेछ भने जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। सुन्दर पहिरनका साथ व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
पारिवारिक मनोमानिन्यले काममा व्यवधान उत्पन्न होला । लेखनकलाको क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । आयआर्जनमा अवरोध आउनेछ । वैदेशिक व्यापारमा झमेला पर्न सक्छ । उपचारमा खर्च होला । अध्ययन–अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जागिर पाइएला । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको सामना गर्नुपर्ला । अध्ययनमा रुचि जाग्ने छ । स्वस्थ्यमा भने प्रतिकूलता रहन सक्ने छ । बुधवारदेखि खर्चसमेत बढ्नाले आर्थिक अभाव देखापर्नेछ। पछिका लागि गरिएको लगानीले भने फाइदै दिनेछ। पहिलेका योजनाहरू अधुरै रहनेछन्।
सामुहिक लगानीमा गरिएको कार्यमा विवाद बढ्ने देखिन्छ । प्रेमप्रसंगले अध्ययन अवरोध आउला । वैदेशिक रोजगारीका अवसर मिल्नेछन् । गरेका कार्यबाट लाभ मिल्ला । मान्यजनको सहयोग मिल्नेछ । राजनीतिक कार्य व्यस्तता बढ्नेछ । नयाँ कार्यको थालनी हुने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । आलस्यले सताउला । आयआर्जनमा सुधार हुनेछ । सप्ताहान्तमा मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्। शुभचिन्तकहरूलाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ।
प्रेमी–प्रेमिकाबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । उपचारमा खर्च होला । अध्ययन–अध्यापनमा सुधार आउनेछ । सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । वैदेशिक क्षेत्रमा लगाएको लगानीबाट लाभ मिल्नेछ । प्रेममा तनाव बढ्नेछ । अध्ययनमा अल्झन आउला । जागिरमा स्थानान्तरणको योग देखिन्छ । रमाइलो यात्रा गरिएला । सप्ताहान्तमा आम्दानी बढ्नाले नयाँ योजना सुरु हुनेछ।
स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । पारिवारिक भ्रमण हुनेछ । काममा जागरुकता आउनेछ । सन्तानको सहयोग मिल्नेछ । प्रेमी वा प्रेमिकाबाट अन्तर्घातको सम्भावना रहेको हुँदा सावधान रहनुहोला । कार्यमा तत्परता बढ्नेछ । अध्ययन–अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । घरजग्गाको कारोबारमा अल्झन आउनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्ला । सप्ताहान्तमा यात्राका बीच आतिथ्यपूर्ण सत्कार प्राप्त हुनेछ।
दैनिक कार्यमा सुधार हुनेछ । प्राविधिक सामानको व्यापारमा प्रशस्त लाभ होला । आफन्तको स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्न सक्छ । वैदेशिक यात्रामा मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । समाजमा विशिष्ट कार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ । शारीरिक दुर्बलता बढ्न सक्छ । आकस्मिक धन लाभ होला । व्यावसायिक कार्यमा अवरोधको सामना गर्नुपर्ला । पठनपाठनमा मन लाग्नेछ । तर सप्ताहान्तमा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ भने तारिफयोग्य कामले आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित बनाउन सक्छ।
खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य कमजोर बन्नुका साथै काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। अप्रिय समाचारले दुःखी बनाउला। नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिए पनि लगनशीलताले बिस्तारै प्रगति हुनेछ। सवारी साधनको खरिद बिक्री हुने योग छ । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने छ । सामाजिक मान सम्मानका योग देखिन्छन् । राजनीतिक क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ । विहीबारबाट कार्यमा अवरोधका साथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्ने देखिन्छ । सप्ताहान्तमा स्वास्थ्यमा कमजोरी देखा पर्न सक्छ।
अध्ययन–अध्यापनमा सुधार आउला । विलासिताका सामग्रीमा खर्च गरिएला । मातापिताको सहयोगले नयाँ योजना बन्नेछन् । न्यायिक कार्यमा अल्झन आउनेछ । राजनीतिक तनावका कारण बोलीमा अस्थिरता आउनेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्ला । वैदेशिक यात्राको योग देखिन्छ । खानपानमा मन नलाग्ला । आलस्य बढ्नेछ । सप्ताहान्तमा दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सफल भइने देखिन्छ।
व्यवसाय परिवर्तन गरिनेछ । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिन सक्छ । आयआर्जनमा वृद्धि हुनेछ । राजनीतिक अन्योल कायमै रहला । शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिएला । कृषि व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ । अल्झनमा परेका कार्य सुचारु हुनेछन् । पढाइमा मन लाग्नेछ । साहित्यिक कार्यमा मान–सम्मान प्राप्त होला । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आइतबार र सोमबार खर्च बढ्नुका साथै स्वास्थ्मा प्रतिकूलता रहन सक्ने देखिन्छ । आफन्तको सहयोगले काम लिने कोसिस गर्नुहोला, सप्ताहान्तमा फाइदा हुनेछ। प्रयत्न गर्दा अध्ययनमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ। कामको सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुन सक्छ। बुद्धिको उपयोगले मात्र लक्ष्यप्राप्ति हुनेछ।
राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । न्यायिक क्षेत्रको विवाद यथावत् रहला । फलाम, सिमेन्टजस्ता सामग्रीको व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ । पैतृक सम्पत्तिमा विवाद उत्पन्न हुनेछ । महत्वपूर्ण कार्यमा सफलता मिल्नेछ । अध्ययन–अध्यापनमा सुधार आउनेछ । वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ । आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन् । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहला । बुध र बिहीबार कार्यमा बाधा पर्न सक्ने देखिन्छ । बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लाभ उठाउन सफल भइनेछ। बीचमा सहयोगका नाममा धोका दिनेहरू सक्रिय रहनेछन्। तापनि हिम्मत गर्दा चुनौती पन्छाउन सफल भइनेछ। योजनाहरू गोप्य राख्नुहोला। आफन्तहरूको सहयोगले फाइदा दिलाउनेछ।
प्रेमी वा प्रेमिकाको विषयमा साथीहरूसँग विवाद पर्न सक्छ । स्थानान्तरण होला । मन मिल्ने साथी भेटिएला । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । न्यायिक विजय पाइनेछ । नयाँ कार्यको थालनीमा अवरोधको सामना गर्नुपर्ला । छोराछोरीको विषयमा श्रीमान्–श्रीमतीबीच मनमुटाव बढ्नेछ । प्रेमी–प्रेमिकाबीच घनिष्टता बढ्नेछ । वैदेशिक यात्रा गरिएला । अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । विहीबारबाट कार्यम अवरोधका साथै स्वास्थ्यमा पनि बाधा पर्न सक्ने देखिन्छ । लगनशीलताले गुमेको प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। इच्छाशक्ति बढ्नाले लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर जुट्नेछ। तर, बन्धु–बान्धवबीच आत्मीयतामा कमी आउनेछ।
कयै मानिस हरु कपाल झरेर हैरान भ्एका हुन्छ । भन्ने गर्छन कि कपाल झरेर हैरान भइयो के गर्ने ? हो यस्तो गुनासो फैलिदैदै गएको छ । कपाल झर्नु एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, अस्वभाविक रुपले कपाल र्झछ भने त्यो चिन्ताको विषय पनि हो । कपाल झर्ने क्रम रोकिएन भने टाउको मुडुलो हुन्छ ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
के तपाइ कब्जियतले ग्रसित हुनुहुन्छ, यसरी हटाउन सकिन्छ
दुधको तर जाडोयाममा छालाका लागि वरदान
शाकाहारी खाना खाएर स्वस्थ बनौं
by Anu Rana | Jan 27
चियाले स्तन क्यान्सरदेखि हड्डी कमजोरसम्म बनाउने वैज्ञानिकको खोज
स्लिम हुने सात घरेलु प्राकृतिक सरल उपाय
जाडोमा छाला र ओठ फूट्न नदिन के गर्ने ?
by Anu Rana | Jan 08